The lupercales, pamavambo eSanta-Valendin - AFRIKHEPRI
The lupercales, kwakabva Saint-Valendin
Mavara matsvene kubva kuAfrica dema
Takura zvimwe zvinyorwa
Covid-19 kufambira mberi
Tumira chinyorwa chako pane saiti
MOVIE KUTI Uone
kugashira UZIMWE NEZVAKRISTU
Par Kouami Nb.t Yamssou Alsankara
Les Lupercales ndiyo mhemberero dzinocherechedzwa gore rimwe nerimwe kubva muna Kukadzi 13 kusvika gumi nemashanu nemuperques, vapristi vekare veRoma pakupera kwegore pane khalenda yeRoma. Iwo luperques anounzwa pamwechete mukoreji iyo inounza pamwe zvizvarwa zvevachembera mhuri vakatanga iro guta reRome.
Nyaya dzino dzakatevedzana dzeGore kupemberera ndangariro mukaka Romulus uye Remus pedyo Bere akabhadharawo mutero Faunus Lupercus, mwari wokubereka uye mudziviriri nemombe pamusoro pemhumhi kuva hafu-murume hafu-mbudzi chitarisiko. Vapristi 12 Luperci akabayira mbudzi kuti mwari wavo mubako Lupercal wetsoka Palatine Hill apo iye-mhumhi Dzakayamwisa Romulus uye Remus aizofanira vasati anounganidzwa nokuda mufudzi vakaroorana vane mukadzi, pfambi, ainzi "Lupa" (mhumhi muchiLatin). Uyu "Lupa" ainzi Acca Larentia uye kutengeserana kwake kweupfambi kwakaita kuti abudirire uye akaisa mari yake kuna Romulus paakafa.
Pamberi peRoma maivapo, vaGiriki vakanga vatopemberera mabiko emapumhi, "Lukéia", iyo iyo Lupercalia ichayerera nayo. Mwari wechiGiriki Pan akavewo akamira muhafu yehafu yembudzi. Akanga ari mudziviriri wevafudzi nemapoka. Pan yaizova rimwe remazita mashomanana aMwari anogona kunzi ainzi Indo-Europe nguva. Mwari Pan ari mukurumbira zvikuru nokuda kwesimba rake repabonde uye zvinonzi akadzidza bonhora kubva kuna baba vake Hermes uye akapfuura mutsika iyi kune vafudzi. Ita zvikamu pamwe chete nevatendi vanofananidzira uye izvi zvine maitiro akaoma uye evechidiki anowanzoita utsinye hwehutano hwouduku.
Chimwe chiitiko chaitungamirirwa nevapristi muprista panguva iyo akachera zvigaro zvevarume vaviri vechidiki kuitira kuti ropa rakateurwa rive rakasanganiswa nemukaka. Zvadaro, majaya aya akafamba achingova asina kupfeka muguta reRoma, achirova zviya vakadzi vaida kuva nomwana, vachishandisa zvipembenene zveganda rembudzi kuti vaite. Iyi mbudzi yairemekedzwa kuva mhuka inomiririra kuchiva parutivi, zvose zvinofadza zvepabonde.
Pakati peizvi Lupercalia, mazita evasikana vaduku vaisarudzwa nemauto nevanhu uye kuenzanisa kwezviitiko kwaingova hupombwe chete. Muchidimbu, yakanga iri nguva yekuparara kwepabonde kwakapararira.
Zvisinei, mushure European 494 AD Pope Gelasius I (Pakutanga kubva North Africa, ona basa Runoko Rashidi) dzakaguma bato uye kuchiiswa ne Valentine, musande aive vavimbisana vakaroorana uye vanoda, uye akarayira kuti iyo 14 February ndiyo zuva rakatsaurirwa kune rimwe bato nechiso chitsva. Zita Valentine akabatwa Valentine pamusoro Terni, mumongi 3e remakore anourayirwa kutenda pasi weRoma Claudius II (Kraudhiyo Marcus Aurelius Gothicus), zita remadunhurirwa rokuti "Kraudhiyo ari Utsinye". Valentine pamusoro Terni akanga kubudikidza zvarayirwa Claudius utsinye, arohwa legionaries uye musoro musi February 14 269.
Takaona kuti mbudzi yakanga yakabatana nemitambo yekubereka. Uyewo, iLupercalia yaiva yemitambo yekuchenesa uye ndiyo chibayiro chembudzi inobva mumutauro weEurope iyo yakakurumbira izwi rokuti "scapegoat" kuti abvise kusvibiswa. MuJudhao-echiKristu tsika, mbudzi yava mumiririri weAnopesitendi uye inofananidzwa naSatani uye ichifananidzira kuchiva. Mune tsika dzekuEurope zvemashiripiti, tinowana humiro hweBaphomet uyo ari mumiriri wehafu-murume hafu yembudzi. Chiratidzo chekufananidzira kweBaphomet chinoitwa naEliphas Levi, mufundisi wechiFrance wezana remakore rechigumi nemana uye chimiro chikuru chekuita zvemashiripiti.
Mukuwedzera pakupa mbudzi chikonzero chekubereka, zvinonzi kutumira uku kukwanisa kwevarume uye izvi zvinotsanangura mutsika yekubatanidza mbudzi uye mukadzi. Zvechokwadi, tinonzwisisa zviri nani panguva yekuiswa kwevaGiriki muEgypt yekare ndima iyi yaHerodotus paanoti: "Zvakaitika, pandakanga ndiri muEgipita, chinhu chinoshamisa muMendesian nome: mbudzi yakanga iri pachena basa iri nemukadzi, uye chiitiko ichi chaizivikanwa kune vose. (Mubhuku rake "Inquiry"). Mendès yakanga iri muNile Delta.
With muranda zhinji uye ichitongwa mabhuku, African zvokunamata kwave denigrated ose pakona zvokuti vomuAfrica vakawanda vagozofuratira kuti uroyi, un'anga, zvechihedheni, kana zvimwe tsvina Mutauro of Genre . Saka chii kutaura tinogona uroyi ichi Valentine Christianity zvizere masikirwo uye netsika Indo-European anomiririrwa virile mbudzi ichi? Pasi pechipfuva chekutsvaga ruponeso rwemweya wedu, vazhinji vanobatanidzwa mumitambo yeEurasian iyo ins uye kunze ivo vanonyatsorega.
Zvose mune zvose, mutambo weLupercalia, uyo wakava Zuva raValentine, chaive chaizvoizvo mhemberero yekunyanyisa apo kusangana kukuru kwakaitwa mutambo unofarira panguva ino. Pasina zvimwe.
Na Nzwamba Simanga
2 nyowani kubva ku € 16,50
1 yakashandiswa kubva € 32,76
kubvira waMay 25, 2020 8:44
Release Date 2015-09-11T00:00:01Z
Nyorera kune yedu yakagadziriswa
Idzo nomwe dzakras nomwe nomwe mitumbi minomwe aMunhu
Tao Te King - Bhuku reNzira neUkomba
Tarindiro Yakagamuchirwa kuGondwana (2016)
Tsvaga uye utenge zvigadzirwa
Kutengesa kwakanyanya: Zvikwereti zvekutora!
Pasi pemoto, rufu seanoshanda hypothesis
Kuzvipira: My Autobiography naDidier Drogba (2016-06-30)
Kutaura pane kukoloni, kunoteverwa na: Kutaura pamusoro peNegitude
Dudziro ye lithotherapy - Simba zvivakwa zvematombo echisikirwo uye makristasi
Chinyorwa chaMarie Madeleine - Chemistry yaHorus uye mashiripiti ezvepabonde aIsis
Dzvanya kuvhara iyi meseji!
Iwindo rinozvivhara otomatiki mumasekondi e3
Wedzera mutsva wekutamba
- Sarudza Kuonekwa -ruzhinji rwevanhuPrivate
Tumira izvi kune shamwari